Prague nyeredzi wachi: maitiro uye kushanda | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 10/01/2022 09:46 | Kuparadzanisa
Sezvatinoziva, maguta mazhinji ane zvidhori zvinhu zvakasarudzika uye zvakakosha. Munyaya iyi, tichataura nezvazvo Wachi yePrague yekuongorora nyeredzi. Icho chiratidzo chePrague uye ine basa rekuda kuziva. Yakagadzirwa mugore ra1410 uye vanoti vanounza rombo rakanaka painomira kushanda.
Muchinyorwa chino tichakuudza kuti wachi yePrague yenyeredzi inoshanda sei uye dzimwe dzenyaya dzayo.
1 Prague nyeredzi wachi
3 Zvinhu zvakakosha zvePrague astronomical wachi
4 Kutukwa kwewachi
Iyi ndiyo inofanirwa kuona kana uri kuenda kuPrague. Wachi yeguta remuchadenga ndiyo imwe yenzvimbo huru dzevashanyi seri kwayo, uye hachisi chinhu chidiki. Iyo ine nyaya inogombedzera (uye tsika) iyo inogona kunyatsogadziriswa kuita riini kana bhaisikopo. Yakaunzwa muna 1410 naJan Ruze, yakaronga makore mazana matanhatu neshanu kubva ipapo.
Nyaya yake, sezvandanga ndichitaura, ine zvakawanda zvinoshamisa: vakapofomadza muvaki mukuru, vachimutadzisa kudzokorora wachi seizvi, izvo vamwe vanoona sedumwa rekuchengetedza guta ... Nhasi tinoisa pfungwa dzedu dzose pairi kushanda nekufamba kwemakore uye tekinoroji inoramba ichikwezva kune chero analog wachi uye masisitimu anofarira.
Iyo Prague Astronomical Clock inoratidzira dhizaini yeastrolabe ine matatu-zvikamu dhizaini inokwanisa kumaka nguva shanu panguva imwe chete. Pamusoro, pakati pezvivharo zviviri, tine nhandare yemitambo yeVaapositori Gumi neVaviri. Mumwe nemumwe wavo anosiya maminetsi makumi matanhatu ega ega kuratidza kuti inguvai. Nhamba dzacho ndedzechimanjemanje kudarika wachi nemazuva kubva muzana remakore rechiXNUMX.
Pazasi tine karenda rine mifananidzo yemwedzi nemwaka, zvichiratidzawo vatsvene pazuva rega rega regore. Mativi ese ari maviri akakosha uye ane hunyanzvi hwekufarira, asi chishongo chewachi iyi chiri pakati pemuviri. Ichi chidimbu chakagadzirwa muna 1410.
Wachi inokwanisa kutaura nguva nenzira shanu dzakasiyana, uye hurongwa hwayo hwenhengo dzemakanika ndeimwe yeanonyanya kuda kuziva. Kune rimwe divi, isu tine zuva regoridhe rinotenderera denderedzwa re ecliptic, richigadzira kufamba kwe elliptical. Ichi chidimbu chinokwanisa kutiratidza maawa matatu panguva: chinzvimbo chemaoko egoridhe munhamba dzechiRoma chinoratidza nguva muPrague. Sezvo ruoko ruchiyambuka mutsetse wegoridhe, runoratidza maawa ari munguva isina kuenzana, uye pakupedzisira, parin’i yokunze, maawa pashure pokubuda kwezuva maererano nenguva yeBohemian.
Chechipiri, inokwanisa kuratidza nguva iri pakati pekubuda kwezuva nekunyura kwezuva. Muhurongwa hwakakamurwa kuita "maawa" gumi nemaviri. Hurongwa huri pachinhambwe chiri pakati pezuva nepakati pedenderedzwa. Zviyero zvinosiyana zvichienderana nenguva yegore, sezvo zuva risiri maawa gumi nemaviri echiedza, uye asiri maawa gumi nemaviri ehusiku. Yokutanga yakareba muzhizha uye yakasiyana muchando. Ndiko kusaka zviratidzo zvemakotesheni zvichishandiswa kutaura nezvemaawa pawachi yepakati iyi.
Chechitatu, pamucheto wekunze wewachi, tinonyora nhamba mugoridhe Schwabacher script. Ndivo vane basa rekuratidza nguva, sezvatakaita muBohemia. Inotanga kumakwa na1 masikati. Mhete inofamba gore rose kuti ienderane nenguva yezuva.
Zvinhu zvakakosha zvePrague astronomical wachi
Zvadaro tine mhete yezodhiac ine basa rekuratidza nzvimbo yezuva pane ecliptic, inova curve yepasi "inofamba" ichitenderedza zuva. Kana iwe uri fan we zodiac, uchaona kuti kurongeka kwemapoka enyeredzi aya kwakapesana newachi, asi pane chikonzero chourongwa uhwu.
Kurongeka kwezvindori kunokonzerwa nekushandiswa kwe stereoscopic projection ye ndege ye ecliptic inobva kuNorth Pole. Zvingaita sezvisinganzwisisiki, asi urongwa uhwu huripowo mune dzimwe wachi dzenyeredzi.
Pakupedzisira, tine mwedzi unoratidza zvikamu zvemasatelliti edu echisikigo. Mafambiro acho akafanana newachi yepamusoro, asi nekukurumidza zvakanyanya. Sezvauri kuona, mapundu ese ari pawachi yenyeredzi iyi ari mucentrosome iyi, aiwa, hatisati tapedza, nekuti pachine humwe humwe.
Wachi ine dhisiki rakagadziriswa pakati uye maviri akazvimirira anoshanda anotenderera discs: iyo zodiac mhete uye yekunze kumucheto yakanyorwa muSchwabacher. Zvakare, ine maoko matatu: ruoko, zuva rinoyambuka kubva kumusoro kusvika pasi, kuita seruoko rwechipiri, uye chechitatu, ruoko rune nyeredzi nyeredzi dzakabatanidzwa kune zodiac.
Ngano inotaura kuti muvezi akaigadzira muna 1410 akaita basa rakatanhamara zvokuti vanhu vakaituma vaida kuona kuti aisazoidzokorora kuti iite yakasiyana nedzimwe munyika, uye vakamupofumadza.
Mukutsiva, akapinda pawachi ndokumisa mudziyo wake womuchina, panguva imwe cheteyo, nenzira inoshamisa, mwoyo wake wakamira kurova. Kubva ipapo zvichienda mberi, zvaidavirwa kuti kufamba kwemaoko ayo uye kutamba kwenhamba dzaro kwakavimbisa budiriro yakanaka yeguta, uye kuti wachi yakamira kushanda zvaizounza nhamo kuPrague.
Paawa imwe neimwe, chiratidziro chakaoma kunzwisisa chairatidzwa mukuedza kudzikamisa mweya yevaviri ava mumwedzi yavakanga vakahwanda seri kwetepi, uye zvakaramba zvichishamisa mazana evanhu nemakanika ayo epamusoro. Chikonzero chekukurumidza kana kusangana ndechekuti nguva chete yawakaita Maiva muna 2002 apo Rwizi rweVltava rwakafashukira uye guta rakatambura mafashamo makuru munhoroondo yaro. Naizvozvo apo wachi yaJanuary yakasarudza kuvhara wachi kuti igadzirise, pakanga pane rudzi rwokutya (uye kuodzwa mwoyo kwakabva kuvashanyi) pakati pavavakidzani vayo vanodavira mashura zvikuru.
Wachi ine karenda yakatenderera ine menduru dzinomiririra mwedzi yegore; mativi maviri - guru, pakati-; quadrant yenyeredzi yakashandiswa kuyera nguva muMiddle Ages (uye iyo inoratidzira nguva muCentral Europe neBhabhironi, pamwe chete nenzvimbo yenyeredzi) uye ine mavara ayo rimwe nerimwe rine revo: tsvuku mambakwedza uye kunyura kwezuva; dema, usiku; uye bhuruu, zuva.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve iyo Prague nyeredzi wachi uye ayo maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Prague nyeredzi wachi